Iche iche nke plums | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Iche iche nke plums
Peach plum: nkọwa na ntuziaka maka na-eto eto
Pọl piich bụ osisi, ọ bụghị nanị nsogbu na-emepụta ihe, kama ọ na-atọkwa ụtọ ịchọrọ owuwe ihe ubi ahụ. Beri bido na August, nha buru ibu, anụ nke tomato bụ ihe na-atọ ụtọ, ụtọ-ụtọ. Pọl piich adabara ọ bụghị nanị maka oriri, kamakwa maka imepụta nchekwa dị iche iche nke ya.
Ịhọrọ ụdị dị iche iche nke ụmụ anụmanụ ndị China
Mkpụrụ osisi ndị China na ubi anyị dị nnọọ obere. Otú ọ dị, ọ na-eguzogide ntu oyi, na-amị mkpụrụ karịa ngwa ngwa ma na-enye mkpụrụ dị elu. Ihe niile dị iche iche bụ ihe mbụ, anyị na-ewetakwara anya gị ndepụta nke ụdị plums ndị a ma ama. Alenushka Sort Alenushka nwetara site na-agafe iche Red na na Girl Girl.
Plum "Honey White": nkọwa nke dịgasị iche iche na cultivation agrotechnology
Mkpụrụ mbụ na-acha chara acha "Honey White" bụ ndị dị elu site na nnukwu mkpụrụ, nnukwu mkpụrụ osisi ndị nwere obi uto na okpukpo. Ihe dịgasị iche iche na-ewu ewu na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi n'ugbo dịpụrụ adịpụ ná mba ahụ. Ka anyị nyochaa isi ihe dị mkpa nke osisi a maka ịkụ na ichekwa. Akwukwo nke ndi di iche iche di iche iche bu ndi okachamara di iche iche nke ulo oru Donetsk nke Institute of Horticulture UAAS, ndi agronomist a na-akwanyere ùgwù nke Ukraine Liliya Taranenko, onye nari afo iri isii na isii na aru oru Nursery Nursery Artyomovskaya.
Niile banyere ụdị plums "Anna Shpet"
Plum "Anna Shpet" nke e dere na ihe ndekọ nke ubi a kụrụ n'ubi nke mkpụrụ. Kwa afọ ọ na-enye mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, mkpụrụ osisi na-esi ísì ụtọ, nke a na-eji ya eme ihe nke ọma maka ịmepụta efere dị iche iche, mmemme oyi maọbụ dịka nri nke onwe. Akụkọ banyere ịzụlite A na-ebute ihe dị iche iche e ji eme ihe n'ụlọ "Anna Shpet" na ngwụsị narị afọ nke XIX, na 1870.
Niile kacha mkpa banyere ụdị plums "Bogatyrskaya"
Plum abụghị nanị ụlọ nkwakọba ihe nke bara uru bara uru, kamakwa ngwaahịa dị ezigbo mma. Ya mere, onye ọ bụla na-elekọta ubi, ịhọrọ mkpụrụ osisi maka ubi ya, chọrọ ka ọ na-eme ya obi ụtọ n'ubi ọ bụla o kwere mee. Ndị na-elekọta akwụkwọ na-elekọta ịba ụba. Ọ bụ ha wetara ụdị osisi dị iche iche a na - akpọ "Bogatyrskaya.
N'ime ezigbo ubi, ọtụtụ ụdị plums dị. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ndi mmadu abiala nkpuru a ihe kariri otu afo. N'oge a, ihe karịrị narị osisi plum pụtara. Ma ọ bụghị ebe ikpeazụ n'ime usoro a bụ Mirabel. Nkọwa nke botanal Mirabel bụ otu ụdị plums nke na-eto eto na-eto eto, na-enwe mgbọrọgwụ dịka mkpanaka na isi awọ na ogwe osisi.
Niile kacha mkpa banyere piom iche "President"
Orchard mara mma ma na-eme nri - nrọ nke onye ọ bụla na-anọ n'oge okpomọkụ. Ya mere, osisi maka ịkụ na saịtị gị ga-akpachapụ anya họrọ, ka e mesịa, enweghi ihe ijuanya na-adịghị mma. Taa, anyị ga-ekwu okwu banyere plums, a na-akpọ ọtụtụ n'ime ha "President". Kedu ihe osisi ahụ dị, ụdị àgwà ndị dị iche iche dị iche iche nke ndị ọzọ, nakwa otú, ebe na mgbe ị ga-akụ osisi na otu esi elekọta ụdị dị iche iche, ị ga-amụta site na isiokwu a.
Niile kacha mkpa banyere piom iche "Angelina"
N'osisi ubi nke latitudes anyị na osisi dị ka plum na-ewu ewu. Plum bụ ụdị mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi, na-agụta ọtụtụ subgenera, na mpaghara nke ọ bụla, ọtụtụ ụdị. Ma ịhọrọ mkpụrụ osisi, ọ bụ iji mara banyere àgwà nke ụdị dị iche iche ọ bụ. Ya mere, n'isiokwu a, anyị na-atụle njirimara nke njirimara "Angelina".
Ihe kachasị mkpa gbasara ịmalite ornamental plum "Pissardi"
Plum abụghị naanị osisi nke mkpụrụ ya nwere uto magburu onwe ya ma ọ bụ ezigbo ihe onwunwe maka ịme jam maka oyi. O nwekwara ike ịrụ ọrụ ndị eji achọ mma ma jee ozi dị ka ihe mmezi nke nhazi mara mma. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ osisi uhie uhie "Pissardi". Ụdị a na-adọta mmasị nke okooko osisi na nke agba akwụkwọ, nke ga-enye ekpomeekpo pụrụ iche na ubi ubi, ụlọ, ogige ma ọ bụ lawn.